NTU မှာ လီရှင်းလွန်းပြောသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာလဲ အခုလို လေသံတွေ ပါသွားတယ်ဗျ။ အို ..ကိုယ်က ပလောဖက်ချင်နယ်ပဲ ... ဒီကဈေးကောင်းမပေးချင်ရင် တခြားမှာ သွားရောင်းကြတာပေါ့ နော့။
ငါ့ဒိန်ခဲ ဘယ်သူရွေ့သွားလဲ စာအုပ်က ဒီနေရာမှာအသုံးဝင်မယ်ထင်တယ်...။
၀ုတ်ပါ့. နေပေ့ါ မခေါ်ချင်. ကနေဒါပဲသွားရောင်းတော့မယ် ..
Arakan Dolphin said...
who cares about that? singapore still need foreigners to boost their declined birth rates.
writing this blog. I
Look into my blog post; http://longislandrockradio.com/sn/blog/view/148203/buying-property-in-spain-by-non-residents
my blog post - http://creativecommunity.altervista.org/members/michahayes89/activity/22236
my site :: http://istanbulhayati.net
Also visit my page - http://creativus.lv/